धरहराको उद्घाटनपछि गौरी मल्लको भावुक स्टाटस « Ramailo छ
धरहराको उद्घाटनपछि गौरी मल्लको भावुक स्टाटस
प्रकाशित मिति : Apr 25, 2021
समय : 4:22 pm
०७२ साल बैशाख १२ गते भूकम्पले ढालेको धरहराको ०७७ साल बैशाख उद्घाटन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ तले धरहराको शनिबार उद्घाटन गरेका हुन् । ढलेको धरहरा उठ्दा अभिनेत्री गौरी मल्लले शनिबारै फेसबुकमा स्टाटस लेखिन् । जुन स्टाटसको चौतर्फी चर्चा भैरहेको छ ।
चौतर्फी चर्चा हुने गौरीले के लेखेकी थिइन् त ? पढ्नुस्, पुरा स्टाटस : धरहरा पटक पटक ढल्यो र पटक पटक उठ्यो पनि । लाग्छ यो पाली धरहराले बलियो बनोट पाएको छ । शानले पुनः एक पटक आफ्नो शिर ठाडो बनाउन सक्षम बन्यो । धरहरा त उठ्यो र पनि मेरो ओठमा गर्वको मुस्कान छैन । धरहराले जस्तै मेरो देशले कहिले उठ्न पाउने ? मेरा देशवासीको पनि धरहराको जस्तै त्यो बलियो जग भएको जीवनस्तर कहिले बन्ने ? हरेक कोण कोण बाट गिराइसकिएको मेरो देशले शानले फेरी कहिले शिर उठाउन पाउने..? धरहराले जस्तै….. ! हो, धरहरा त उठ्यो तर हामी कहिले उठ्ने ?